Iindaba -2020 ngunyaka owodwa, i-COVID-19 isasazeka kwihlabathi lonke ukusukela ekuqaleni konyaka
U-2020 ngunyaka owodwa, i-COVID-19 isasazeka kwihlabathi liphela ukusukela ekuqaleni konyaka
Ngokungalindelekanga, unyaka we-2020 ngunyaka okhethekileyo, i-COVID-19 isasazeka kwihlabathi lonke ukusukela ekuqaleni konyaka. Bonke abantu baseTshayina baphila umthendeleko othuleyo wasentwasahlobo, bengatyanga ngaphandle okanye bethenga ngaphandle, kungekho ntlanganiso nabahlobo okanye ndwendwela izihlobo. Yahluke kakhulu kunangaphambili
Enkosi kurhulumente waseTshayina, ukusasazeka kwakulawulwa kakuhle, inyathelo ngenyathelo, iifektri zavulwa nganye nganye.
Sasinexhala kakhulu xa sisekhaya, kuba sityikitye iprojekthi enkulu kanye phambi komnyhadala wasentwasahlobo, kunye nexesha lokuhambisa elixineneyo. Nangona intsholongwane ingalindelekanga, asithandi ukufika emva kwexesha nangasiphi na isizathu. Ukusukela ngomhla esiqala ngawo ukusebenza, bonke abasebenzi basebenza nzima kakhulu kunye, besebenza nzima yonke imihla, ukuze bafumane ixesha lokuhanjiswa.
Ekugqibeleni, sigqibe iqashiso lokuqala, ii-4pcs zemigqomo zikulungele ukuthunyelwa ngaphandle. Khangela! Zintle kanjani! Ukwabelana ngelitha legolide, njengebhongo ngabo bonke abasebenzi beStamina! Umxhasi wethu ukonwabile kakhulu kukuva malunga nayo, ingxelo ye-QC ibonisa ukuba zonke iiparameter zikulungele, banokuzifumana ngenyanga enye, hayi indlela ekuchulumancisa ngayo! Kusekho ngaphezulu kwe-50pcs ekufuneka igqityiwe, kwaye i-COVID-19 isasiphembelela, Abasebenzi bethu abonelanga, uninzi lwabasebenzi alunakushiya amakhaya alo ukusukela ngeholide ukuphepha nawuphi na umngcipheko. kodwa siqinisekile kakhulu, sayila iijigs ezisebenzayo ukwenza indibano yokusebenza okuphezulu, zonke iinkqubo zihamba kakuhle kwaye zinobuchule. Abasebenzi bethu abaziva bediniwe nangona besebenza ngaphezulu kwemihla ngemihla, inkampani nayo izama konke okusemandleni ayo ukunika abasebenzi imeko-bume entle ngakumbi, nezitya ezimnandi kunye nekhefu lekofu kunye nokutya okulula.
Jonga kwakhona kwimigqomo egqibeleleyo, ayinasiphene. Liqine kangakanani iqela! Inokuthenjwa kwaye isebenza ngokufanelekileyo, kufanelekile ukuba uyithembe!